Isishwankathelo seNkampani- Anshun AKF Medical Technology Co, Ltd.
Iindleko zezabelo Anshun AKF Medical Technology Co., Ltd.
Iindleko zezabelo Anshun AKF Medical Technology Co., Ltd. ibekwe kwisakhiwo sefektri ye-E6, isayensi yemizi-mveliso kunye nePaki yeTekhnoloji, Isithili seXixiu, iNdlela yeLiangliu, iSithili seXixiu, iSixeko saseAnshun, kwiPhondo laseGuizhou, esigubungela indawo engama-3200 ㎡, kunye nendawo yokugcina imveliso engama-409, sineeworkshop ezingama-2000 kunye neofisi engama-4204 kunye nendawo yokuhlala. Inkampani yethu yinkampani edibanisa i-R & D, uyilo, imveliso kunye nokuthengisa. Sizimisele ukubonelela abathengi bethu ngeyona nkonzo intle.
Eyethu inkampani eneemfuno ezizodwa kwimveliso yemaski ye-FFP2, imaski ye-FFP3, i-kn95 iimaski zokhuselo zobuqu, iimaski zoqhaqho zonyango, iimaski zoluntu ezilahlwayo, sinemveliso yethu yasekhaya yeziqinisekiso zonyango, sidlulile kwimigangatho yovavanyo lwasekhaya Gb2626-2006, imigangatho yamanye amazwe en149, en 14683, CE, njl.
Inkqubo ye-Inkampani idibanisa i-R & D, uyilo, uphawu kunye nokuthengisa kunye ukuze ibe yinkampani edumileyo. Ngokwembono yetekhnoloji yefayibha, singena kwishishini lezempilo kwaye sinikezela ngothotho lweemaski ezilahlwayo kunye neemaski ze-kn95, imaski ye-FFP2, imaski ye-FFP3 kuluntu.
I-Shun AKF yeTekhnoloji yoNyango Co., Ltd.lishishini elitsha kwicandelo leemaski,
Ukusuka ekukhetheni nasekuthengweni kwezinto kuyilo loyilo lokupakisha, kunye nokukhethwa koomatshini, njl., Sizimisele ukuba lolona luhle kolu shishino.
ThinaKufuneka uqiniseke ukuba yonke imaski esivelise yona yeyona ilungileyo kolu shishino. Vumela wonke umsebenzisi wesigqumathelo se-AKF afumane
eyona ndlela yokhuselo.
KwiOkwangoku, iimveliso zemaski zikaRunbo zifunyenwe kumazwe amaninzi nakwimimandla kwihlabathi liphela, kubandakanya iYurophu, i-United States, iJamani, i-United Kingdom, i-Australia, i-Russia, i-Hong Kong, njl. Idlale indima ebalulekileyo ngexesha lobhubhane, kwaye siyathemba ukuba abathengi abanolwazi ngakumbi nangakumbi ekhaya nakumazwe aphesheya baya kuyithemba iRunbo brand. Sikwanqwenelela impumelelo yonke ekulweni ubhubhane!